Maxaad ka xasuusataa ciyaartoy xirfadooda ku soo gabagabeeyay MLS | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Maxaad ka xasuusataa ciyaartoy xirfadooda ku soo gabagabeeyay MLS
Himilo – Naadiga aad ku abuurtay heerkaaga halyeeynimo marka aysan rabin inay bixiso lacagaha waaweyn si ay kuugu sii hayso, taasi waa marka wakiilkaagu kuula yimaado wax kale.
Waa naadi Maraykanka ah kuwaas oo raba inay qandaraaska u labanlaabaan waana taas dhab ahaan wixii ay sameeyeen 10-kan ciyaartoy .
Mar walba waxaa jira musiibo ku xeeran xirfadda Kaka ka dib markii uu halyey ka noqday AC Milan markii uu u wareegistiisii Real Madrid ugu dambeyntii ku guuldarreystay dhaawacyo xiriir ah dartood.
Laakiin naxariis kasta ayaa ka baxday markii uu noqday ciyaaryahankii abid ugu mushaarka badnaa MLS markii uu u saxiixay Orlando City si uu u noqdo ciyaaryahankoodii ugu horreeyay abid markii ay soo baxeen 2014.
Waxa uu saddex sano ku qaatay America ka hor inta uusan u bixin kabaha 2017-kii ka dib markii uu ku guuleystay liis koobab – oo uu ku jiro Ballon d’Or 2007.
Ciyaartoyga ugu safashada badan Germany oo 150-jeer ah, ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ayaa si caan ah ugu horseeday dalkiisa inuu ku guuleysto koobkii adduunka ee 1990-kii markii ugu sarreysay awoodiisa, isagoo garaacay xulka Diego Maradona ee Argentina.
“Isagu waa kan ugu weyn ee aan la kulmo xirfadeyda oo dhan, waxaana u maleynayaa inay taasi ku filan tahay inaan ku qeexo isaga,” Maradona ayaa mar uu ka hadlayay isaga yiri, halka dad badan ay u arkaan inuu yahay ciyaaryahanka khadka dhexe ee ugu wanaagsan abid.
Laakiin xirfadiisu waxay ku dhammaatay horyaalka MLS markii uu u saxiixay MetroStars 2000 – oo hadda loo yaqaan New York Red Bulls – in kasta oo uusan muddo dheer sii joogin kaliya 16 kulan ayuu u dheelay ka hor inta uusan fariisan.
Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu quruxda badan ciyaarta, Valderrama timahiisa kaliya ayaa ka dhigay xiddig heer sare ah.
Laacibka reer Colombia waxa uu inta badan waayihiisa ciyaareed ku soo qaatay Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika,waxana uu ku soo dhexjiray Yurub Montpellier iyo Real Valladolid,laakin waa waddankii uu caanka ku ahaa – isagoo jiil dahabi ah u horseeday saddex koob oo adduunka ah.
Laakiin waqtigiisii garoonku waa uu soo idlaaday markii 2001 uu hal sano la qaatay Colorado Rapids – ku dhawaad ​​toban sano ka dib markii uu noqday mid ka mid ah ciyaartoydii abid ugu horreysay ee MLS.
Ciyaaryahankii hore ee England ayaa ka soo jeeda qoys weyn oo kubada cagta ah oo leh halyeygii Arsenal Ian Wright aabihiis, halka Shaun uu ku riyaaqay waqtiyo Manchester City, Chelsea iyo QPR.
Ugu dambeyntii, Wright-Phillips wuxuu go’aansaday inuu arko waxa dhammaan buuqa ku saabsan yahay oo uu ku biiro walaalkiis Bradley MLS ee New York Red Bulls.
Waxa uu joogay waqti dheer, in kastoo, uu ka tagay si uu ugu biiro looxdii Drogba ee Phoenix Rising sanad ka dib 2017.
Jamaahiirta Chelsea waxay mar walba u aqoonsan doonaan Drogba inuu yahay ninkii ugu dambayn qaaday koobkoodii ugu horeeyay abid ee Champions League intii lagu jiray ololihii 2012kii.
Sanadihii la soo dhaafay, weeraryahanku waxa uu saameeyay daafacyada Premier League waxa uuna ka tagay dhaxal mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan Afrika si uu ugu soo bandhigo heerkan.
Sanadkii 2015, Ivorian-ka ayaa xididada u siibay oo ka tagay Yurub kuna biiray MLS – isagoo u saxiixay Montreal Impact ka hor inta uusan u tagin Phoenix Rising halkaas oo uu ku noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee milkiilana ah.
Shaki la’aan, mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnayd ee abid ka qaybqaata Premier League ka dib xilli ciyaareedyo yaab leh oo uu la qaatay Arsenal iyo rikoorkiisa gooldhalinta.
Laacibka reer France ayaa ka tagay doona Gunners-ka uu jecel yahay kuna biiro Barcelona 2007-dii, laakiin sheekadiisii ugu dambeysay waxay timid saddex sano kadib markii uu u saxiixay New York Red Bulls.
Waxa uu runtii ku ciyaaray Mareykanka in ka badan sidii uu ku ciyaaray Nou Camp, oo ay ku jirtay amaah uu dib ugu soo laabtay Arsenal 2012, ka hor inta uusan ka fariisan 2014.
13 sano oo uu joogay Chelsea ayaa ka dhigtay halyey kooxdaas ah, halkaas oo uu yahay gooldhaliyahooda abid ugu sarreeya inkasta oo uu khadka dhexe ka ahaa.
Ka dib markii uu ku guuleystay wax walba oo kubada cagta ah, wuxuu ka tagay Blues oo uu ku biiray City 2014-kii ka hor inta uusan bixin hal xilli ciyaareed ka dib.
Waxa uu u saxiixay kooxda ay bah wadaaga yihiin ee New York City FC waxaana uu ku qaatay hal sano halkaas
Mr. Bavaria waxa uu wax walba oo ku saabsan Bayern Munich ku tilmaamay in uu hoos u dhigi doono mid ka mid ah ciyaartoygoodii abid ugu fiicnaa ka dib markii uu ku qaatay – ku dhawaad – xirfadiisa ciyaareed oo dhan.
Louis van Gaal ayaa ku guuleystay inuu ku qanciyo ciyaaryahanka khadka dhexe inuu u dhaqaaqo Manchester United isaga oo la socda laakiin dhaawacyo ayaa si naxariis darro ah ugu dhacay Premier League, waxaana uu ka tagay 2017.
Markan MLS-ku wuxuu u yeedhay qaab Chicago Fire halkaas oo Schweinsteiger uu ka helay qaab iyo taam, isagoo ciyaaray 92 jeer ka hor inta uusan bixin kabaha.
Pirlo xirfadii hore ee khadka dhexe sidoo kale ma ahayn mid xun, isagoo koobab madadaalo ah kula guuleystay AC Milan, Juventus iyo Italy.
Pirlo wuxuu sidoo kale Lampard kula biiray kooxda New York City 2015 si uu u sameeyo khad dhexe oo qurux badan, laakiin waxa uu sii joogay muddo dheer, isagoo kaga fariistay 2017.
Ciyaaryahankii abid ugu fiicnaa Liverpool, Gerrard waa nin hal koox ah laakiin xitaa iskama celin karin calaamadaha dollarka markii ay iftiimeen.
Isagoo u muuqda inuu maamuli doono kulankiisa Premier League isagoo tababare ah oo ka socda Aston Villa, 41-sano jirkaan ayaa laga yaabaa inuu dib u xasuusto waayihiisii Mareykanka.
Si la mid ah cadowgiisa khadka dhexe ee Lampard, waxa uu wareegay 2015-kii – si isagoo ku biiray David Beckham kooxdiisii hore ee LA Galaxy halkaas oo uu ku qaatay hal sano ka hor inta uusan soo gaba gabayn xirfadiisa sharafta leh.
W.Q: Hanaa Maxamed Maxamuud
Previous: Nin 40 sano raadinayay cunnada asalka ee dalkiisa
Next: Macluumaad ku saabsan qaaradaha adduunka